BEDDEL DEKADDA MASAAFADA FOG (RDP) GUDAHA WINDOWS 10 - JILICSAN
Beddel Dekadda Masaafada Fog (RDP) gudaha Windows 10
Qaar badan oo ka mid ah isticmaalayaasha Windows ayaa ka warqaba muuqaalka Desktop-ka fog ee ku jira Windows 10. Badankoodna waxay isticmaalaan Desktop Fog sifada lagu galo kombuyuutar kale (shaqo ama guri) meel fog. Mararka qaarkood waxaan u baahanahay inaan si degdeg ah uga helno faylasha shaqada kombiyuutarka shaqada, xaaladahan oo kale desktop-ka fog wuxuu noqon karaa badbaado. Sidan oo kale, waxaa jiri kara dhowr sababood oo kale oo aad ugu baahan tahay inaad meel fog ka gasho kombiyuutarkaaga.
Waxaad si fudud u isticmaali kartaa desktop-ka fog adiga oo kaliya ku dejinaya xeerka gudbinta dekedaha router . Laakiin maxaa dhacaya haddii aadan isticmaalin router si aad u gasho internetka? Hagaag, xaaladaas, waxaad u baahan tahay inaad bedesho dekedda fog ee desktop si aad u isticmaasho muuqaalka fog ee desktop.
Deked-desktop-ka fog ee caadiga ah ee xidhiidhkani ku dhaco waa 3389. Maxaa dhacaya haddii aad rabto inaad beddesho dekeddan? Haa, waxaa jira xaalado qaarkood marka aad door bidayso inaad beddesho dekeddan si aad ugu xidhato kombuyuutar fog. Mar haddii dekedda caadiga ah qof kastaa garanayo sidaas darteed tuugadu waxay mararka qaarkood jabsan karaan dekedda caadiga ah si ay u xadaan xogta sida aqoonsiga gelitaanka, faahfaahinta kaadhka deynta, iwm. Si aad uga fogaato dhacdooyinkan, waxaad bedeli kartaa dekedda caadiga ah ee RDP. Beddelka dekedda caadiga ah ee RDP waa mid ka mid ah tallaabooyinka amniga ugu wanaagsan si aad u ilaaliso xiriirkaaga oo aad u gasho kombuyutarkaaga meel fog dhib la'aan. Markaa annagoon wax wakhti lumin aan aragno sida loo beddelo Dekadda Desktop Fog (RDP) gudaha Windows 10 iyadoo la kaashanayo hagaha-hoos ku taxan.
Sida loo beddelo Dekadda Mashiinka Fog (RDP) gudaha Windows 10
1. Ku fur tifaftiraha diiwaanka qalabkaaga. Riix Furaha Windows + R iyo nooca Regedit gudaha Orod sanduuqa wada hadalka oo ku dhufo Geli ama Riix OK
2. Hadda waxaad u baahan tahay inaad u socoto jidka soo socda ee tifaftiraha diiwaanka.
3. Hoosta furaha Diiwaanka RDP-TCP, hel meesha Lambarka Dekedda iyo laba-guji dusheeda.
4. Sanduuqa qiimaha wax ka beddelka DWORD (32-bit), u beddel Qiimaha tobanlaha Saldhiga hoostiisa.
5. Halkan waxaad ku arki doontaa dekedda caadiga ah - 3389 . Waxaad u baahan tahay inaad u beddesho lambarka deked kale. Sawirka hoose, waxaan ku bedelay lambarka nambarka dekeda 4280 ama 2342 ama lambarka aad rabto. Waxaad bixin kartaa qiimo kasta oo ah 4 lambar.
6. Ugu dambayntii. Guji OK si loo badbaadiyo dhammaan goobaha oo dib u bilaabo kombayutarkaga.
Hadda marka aad bedesho dekedda caadiga ah ee RDP, waqtigeeda waa inaad xaqiijisaa isbeddelada ka hor intaadan isticmaalin isku xirka miiska fog. Waa muhiim inaad hubiso inaad beddeshay lambarka dekedda si guul leh oo aad ka geli karto kombuyutarka fog ee dekeddan.
Tallaabada 1: Riix Furaha Windows + R iyo nooca mstsc oo ku dhufo Geli
Tallaabada 2: Halkan waxaad u baahan tahay ku qor cinwaanka IP-ga ee server-kaaga fog ama magaca martida loo yahay oo leh nambarka cusub ee dekedda ka dibna ku dhufo kan Ku xidhnow badhanka si aad u bilowdo xidhiidhka PC-gaaga fog.
Waxa kale oo aad isticmaali kartaa aqoonsiga gelitaanka si aad ugu xidhid kombayutarka fog, kaliya guji Muuji fursadaha xagga hoose ka dibna geli username iyo password si aad u bilowdo xidhiidhka. Waxaad kaydin kartaa aqoonsiga si aad u sii isticmaasho.
Sidoo kale Akhri: Hagaaji Tifaftiraha Diiwaanka ayaa joojiyay shaqadii
Markaa waxaa lagugula talinayaa inaad ka beddesho Dekadda Mashiinka Fog (RDP) gudaha Windows 10, markaad sidaa samayso waxaad ku adkeynaysaa tuugada inay galaan xogtaada ama aqoonsigaaga. Guud ahaan, habka kor ku xusan ayaa ku caawin doona si fudud u beddel Dekadda Mashiinka fog fog. Si kastaba ha noqotee, mar kasta oo aad bedesho dekedda caadiga ah, hubi in isku xirka si sax ah loo aasaasay.